Aan qayilno iyo xoolo aan dhaqanno waa laba aan is qaban. By Muxumed Maxamed M. Baadil (Khadar)(Hadhwanaagnews) Friday, August 10, 2012 Somaliland waa dal curdin ah oo aan lahayn dhaqaale sidaas u buuran. Somaliland waa dal iskii isku magacaabay kuna Somaliland waa dal curdin ah oo aan lahayn dhaqaale sidaas u buuran. Somaliland waa dal iskii isku magacaabay kuna dhawaaqay madax banaani, isla markaana uu weli ka maqan yahay aqoonsi caalami ah oo ay ka hesho dunida. Waxa jira waxyaabo badan oo uu la maqan yahay ictiraafku, haba ugu muhiimsanaado dhaqaaluhuye. Ictiraaf laaan darteed, Somaliland waxa ka maqan maalgashi caalami ah oo ay sameeyaan wadamada dunidu. Marka heshiis la galayo sida mid maalgashi, waxa lagama maarmaan ah in uu heshiisku u dhexeeyo laba wadan oo dunida ka tirsan lana aqoonsanyahay. Taasi waxa ay sababtay
in aanay somaliland ciyaari karin doorkaa dawlad caalami ah. Waxa sidoo kale la odhan karaa ma jirto dawlad maanta dammiin ka noqota Somaliland si ay u gasho heshiis caalami ah. Waxa kale oo lagu sababeeyaa maalgashi laaanta, mandaqada ay ku taal Somaliland oo ah mid aan degenayn isla markaana aan la saadaalin karin waxa ay noqon karaan xaaladaha nabadgelyo ee mustaqbalku. Waxa kale oo dhacda in uu wadanku maalgalin samaysan karo isaga oo lacag soo amaahanaya. Waxa lacag laga soo amaahan karaa wadamada dhaqaalahoodu kobcay iyo weliba hayado caalami ah oo ay ka mid yihiin, baanka adduunka iyo hayada lacagta adduunka. Balse shuruudaha amaahda inta aan la isla gaadhin, waxaaba somaliland caqabad ku noqotay ma tahay waddan dunida si sharci ah uga tirsan. Meelaha Somaliland laga maalgein karo waxa ka mid ah: shidaalka, macdanta, beeraha IWM. Waxa aynu ogsoonahay in aanay Somaliland lahayn dhaqaale ku tiirsan warshado, ama waxsoosaar kale.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dhaqaalaha Somaliland waxa laf dhabar u ah xoolaha nool inkasta oo ay baryahan dambe lacagta dibedda laga soo xawilaa door weyn ka ciyaarto dhaqaalaha dalka.
60% dad weynaha ku nool Somaliland, waxa uu nolol maalmeedkoodu ku tiirsan yahay waxsoosaarka xoolaha sida caanaha iyo hilibka. Xoolaha nool waa shayga keli ah ee ay dhoofiso Somaliland, waxaanay badankiisa u dhoofisaa jasiirada carabta.
Xoolaha nool waxa ay door weyn ka ciyaaraan dhaqaalaha waddanka, iyada oo 60-65% dhaqaalaha qaranku ku tiirsanyahay xoolaha nool. Dakhliga soo gala dawladda ayaa isaguna aad ugu tiirsan xoolaha nool, waxaana ay dawladdu cashuuro kala duwan ka qaaddaa xoolaha laga bilaabo maka ay sayladda yimaadaan ilaa inta markabka laga saarayo.
Waxaana lagu qiyaasay in dakhliga guud ee dawladda 30% ka mid ahi ay uga soo xeroodaan xoolaha nool. Waxa xoolaha nool shaqo ka hela dad aad u tiro badan oo ka mid ah dadweynaha ku nool Somaliland. Xoolaha Somaliland lagu dhaqaa waxa ay kala yihiin: adhi, oo u kala baxa riyo iyo ido, iyo ishin oo u kala baxa lo iyo geel, adhiga ayaana ah nooca ugu badan ee ay dadka Somaliland dhaqdaan.
Iyada oo ay xoolaha nool dadka Somaliland iyo dalkaba ugu jiraan doorkaa aynu tilmaanay, ayaa waxa haddana jira caqabado badan oo ay wajahayaan. Dhibaatooyinkan waxa keenay waxyaabo dhawr ah oo ay ka mid yihiin: xaalufka iyo is bedelka degaanka, iyo uhaajirida dadka xagga magaalooyinka, waxa se jirta dhibaato la taaban karo oo uu ku hayo geedka qaadka loo yaqaano.
Sida aynu ka wada dharagsannahay, qaadku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan ku haya bulshadeena. Qaadku waxa uu si baan u saameeyaa qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyaro iyo waayeelba. Dhibaatada qaadku waa mid aan qarsoonayn oo ka daahirtay bulshadan aynu ku nool nahay dhexdeeda. Qaadku waxa uu qofka kala dagaallamaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin: dhaqaaalaha, waqtiga, caafimaadka, karaamada IWM. dadka reer miyigu waxa ay ahaan jireen dad aad u daryeela xoolahooda. Xoolaha waxa ay la doonan jireen hadba meeshii biyo iyo baad wanaagsan, marka uu reerku guurayo waxa ay u sahamin jireen guriga ugu wanaagsan, shilinta ayay ka guri jireen, qodaxdana waa ay ka saari jireen. Dadka xoolo dhaqatadu waxa ay ahaayeen dad nadiif ah oo lagu yaqaano daacadnimo, run sheegid, ballan ilaalin, xalaal miirad iyo amaano xafid. Baryahan dambe waxa dadkaa gaadhay saamayn weyna ku yeeshay geedka qaadka. Waxa uu dadkii ka dhigay kuwo dantooda moog oo isaga uun ka shaqeeya. Waxa ay samaysteen tuulooyin ay isugu yimaaddaan habeen oo dhanna ku raamsadaan qaadka aroortiina hurdo ama qaadiro ku dhammaystaan. Ninka reerku waxa uu ahaan jiray masuulka reerka, kaas oo kala dabari jiray hawlaha reerka gebi ahaamba. Waxaanuu isna ku foofi jiray wixii kaga soo hagaaga hawlaha guriga hadii ay tahay geel raacid ama aroorin, reer oodid, sahamin IWM. Raggu waxa ay ahaayeen xoogga reerka, waxaana hubaal ahayd in reerku ku tiirsananaan jiray maskaxda iyo xoogga ragga. Raggu immika marka ay aroortii dareeriyaan geela, waxa ay tagaan tuulaha iyaga oo geelana isaga tegaya ama wiil yar oo dabadhoon ah kaga taga. Taasi waxa ay sababaysaa in geelii aanuu helin dhammaan wixii uu u baahnaa, dayacaadaasina waxa ay keentaa in tayadii xooluhu hoos udhacdo, sida ay soomaalidu ku maahmaahdana xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan. Ninku waxa uu qaadka u cunaa six ad dhaaf ah, isaga oo marka uu marduuf cunoba soo qabta orgac kuna soo xidha maqaaxida. Arrintan oo ah mid aad looga yaxyaxo, waxa ay keentay in ay raggii lexejecladii ka tagto oo ay adhigii gumaadaan. Waxa jira nooc ka mid ah orgacda oo loo bixiyay abbaa qaatay, kaas oo ah nooca ay raggu ku bixiyaan qaadka.
Waxyaabaha lala yaabo waxa ka mid ah in ragga laga ilaaliyo xoolihii ay ka masuulka ahaayeen oo uu ninku orgacdiisa maalinba mid si qarsoodi ah u xado si uu ugu bixiyo dayntii uu qaadka kaga cunay tuulaha. Qaadka dhibaatooyinkiisa waxa ka mid ah in ay dadku daynta ama qaanta lagu yeesho ay u qaataan wax caadi ah oo aanay masuuliyad badanba iska saarin in ay dib u bixiyaan. Marka laga hadlayo safarka ay magaalada usoo doontaan iyo sida ay ula macaamilaan, reermiyigu waxa ay u kala qaybsamaan laba qaybood: qaar waa kuwo uu qorshahoodu aad u wanaagsan yahay waxaana ay xoolaha wixii mac iibiyaan waqtiga barwaaqada, waxaana ay kaydsadaan wixii ay raashin siisan lahaayeen jiilaalka, ama waqtiga abaarta. Kuwa kalena waa qaar lacagta ay xoolaha ka helaan barwaaqada, iska isticmaala iyaga oo aad mooddo in aanay jiilaal dambeba ku noqonayn, waxaana ay taasi sababtaa in ay jiilaalka kolba meel amaah u doontaan. Immika qolada hore ee qorshaha wanaagsan ku socotaa waabay yaraatey sababo badan awgood, hase ahaatee waxa jirta in ay dadku dayntii iska fudaydsadaan. Waxaana keenay in qofkii meel walba dayn lagaga leeyahay oo xataa qaarkood ay daynta qaadka ka horreysiiyaan ta raashinka. Natiijaduna waxa ay noqotay in ay dadkii ku sifoobaan dhaqan xun oo ah deyn bixin laaan.
Meelaha qaarna waxaabay gaadheen in ay dumarku yihiin kuwa xoolaha magaalooyinka keena, iibiyana kedibna maamula lacagta. Maadaama oo ay raggii qaarkood noqdeen qayrul masuul hadduu rabo aan reerkii raashin keenayn ee qaad isaga cunaya lacagtii, sidaas awgeed ayaaba laga ilaaliyaa ragga waxyaabo badan. Sida aynu soo sheegnay xoolaha nool waa lafdhabarta dhaqaalaha Somaliland, haddii ay sidan arrimuhu kusii socdaanna waxa hubaal ah in uu ummadan dhaqaalaheedii meelxun ku socdo. Waxa loo baahanyahay in dhibaatadaa xalkeeda loo wada guntado ragguna ay ka waantoobaan dhaqankaa liita. Aynu ka wada shaqayno kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaheeda.
Muxumed Maxamed M. Baadil (Khadar)